“မရှိရင် လာတောင်းစား.. လိမ်မစားနဲ့”ဆိုပြီး ဒဲ့ဆော်လိုက်တဲ့ ထူးခန့်ကျော်.. – Maythadin
May Thadin | October 22, 2021 | Cele News | No Comments
မရှိရင်ကျနော့်ဆီ လာတောင်းပါနော်လိမ်မစားပါနဲ့ဆိုပြီး လိမ်စားတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ကစ်လိုက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်
ဖတ်ရှု့အားပေးနေကြသော ပရိသတ်ကြီးများအနေနဲ့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် ထူးခန့်ကျော်ဆိုရင် မသိသူ မရှိ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါနော်။ ထူးခန့်ကျော်ဟာဆိုရင်တော့ ဗီဒီယိုခေတ်ထဲက..
ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာမှာ သဘာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းလှတာကြောင့် ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာ ရရှိထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုနောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရာမှာလည်း
ပရိသတ်တွေက သဘောတကျ ဝန်းရံအားပေးခဲ့ရတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နော်။ ယခုအခါမှာဆိုရင်တော့ ကပ်ရောဂါဘေးကာလမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ်နားထားရတဲ့ ထူးခန့်ကျော်ဟာ..
အနုပညာအလုပ်နဲ့ ပရိသတ်ကို အလုပ်အကျွေး ပြုခွင့်မရသေးချိန်ကာလမှာ သူတက်ကျွမ်းထားတဲ့ ဆေးပညာနဲ့ လေဖြတ်လေဖြန်းနဲ့ အကြောရောဂါ အမျိုးမျိုးတို့ကို အခမဲ့ကုသပေးပြီး ပရိသတ်ပြည်သူတွေအတွက် ပေးဆပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ. အခုတစ်ခါမှာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်ကမရှိရင် ကျနော်ဆီလာတောင်း ပါနော်လိမ်မစားကြပါနဲ့ဆိုပြီး နာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လိမ်စားတဲ့သူတွေကို အခုလိုဒဲ့ဆော် လိုက်ပါတယ်နော်။
သရုပ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်က “မရှိရင် ကျွန်တော်စီ လာတောင်းပါနော်၊အခုလို လူမပီသတာတော့ မင်းတို့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလိုမင်းတို့ရဲ့သံသရာအတွက် မင်းတို့ကိုယ်စား ရှက်မိပါတယ်…
ကျွန်တော့်မှာ ဒီအကောင့်တခုပဲ ရှိပါတယ်၊ သူများကို သိက္ခာကျအောင်လုပ်ပြီး စားရမဲ့ထမင်းတလုပ်အတွက် မင်းတို့စားဝင်ရဲ့လား ကျွန်တော်ဘက်က အပြစ်မမြင်ပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကို သံသရာအတွက် ယူမသွားပါနဲ့တော့..
ကျွန်တော်ဘက်က ဝဠ်ကြွေးများရှိရင်လဲကျေပါစေ၊ မင်းတို့ဘက်က သူများတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး စားရမဲ့ထမင်းလုပ်တွေဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ဒီကနေ့အထိ ကျွန်တော်ဘယ်သူ့စီကမှ အလှူမခံဖူးပါနော်၊ လူလိမ်လူညာများ ဘေးမှ ကင်းဝေးကြ ပါစေဆိုပြီး” ပြတ်ပြတ်သားသား ရေးသား ပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး။
လူတွေကလည်းနော် ဘာ့ကြောင့်များ သူများကောင်းရာကောင်းကျိုး လုပ်နေတာကို မကူညီတဲ့အပြင် နာမည်အလွဲသုံးစားလုပ် ယူသုံးပြီး လိမ်စားညာစားချင်နေကြလဲ မသိပါဘူးနော်။
ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း လူလိမ်လူညာလူကောက်တွေရဲ့ ဘေးမှကင်းဝေးကြကာ လူကောင်းသူကောင်း လူမှန်သူမှန်တွေနဲ့သာ ဘဝမှာတွေ့ဆုံနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မရွိရင္က်ေနာ့္ဆီ လာေတာင္းပါေနာ္လိမ္မစားပါနဲ႕ဆိုၿပီး လိမ္စားတဲ့သူေတြကို ဒဲ့ကစ္လိုက္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ထူးခန႔္ေက်ာ္
ဖတ္ရႈ႕အားေပးေနၾကေသာ ပရိသတ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႕ နိုင္ငံေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထူးခန့္ေက်ာ္ဆိုရင္ မသိသူ မရွိ အားလုံးသိၿပီးသား ျဖစ္မွာပါေနာ္။ ထူးခန့္ေက်ာ္ဟာဆိုရင္ေတာ့ ဗီဒီယိုေခတ္ထဲက..
ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာမွာ သဘာဝက်က် သ႐ုပ္ေဆာင္ပီျပင္လြန္းလွတာေၾကာင့္ ပရိသတ္အားေပးမႈ အခိုင္အမာ ရရွိထားနိုင္ခဲ့တဲ့ မင္းသားႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း ဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္း
ပရိသတ္ေတြက သေဘာတက် ဝန္းရံအားေပးခဲ့ရတဲ့ ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ယခုအခါမွာဆိုရင္ေတာ့ ကပ္ေရာဂါေဘးကာလမွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြ ရပ္နားထားရတဲ့ ထူးခန့္ေက်ာ္ဟာ..
အႏုပညာအလုပ္နဲ႕ ပရိသတ္ကို အလုပ္အေကြၽး ျပဳခြင့္မရေသးခ်ိန္ကာလမွာ သူတက္ကြၽမ္းထားတဲ့ ေဆးပညာနဲ႕ ေလျဖတ္ေလျဖန္းနဲ႕ အေၾကာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အခမဲ့ကုသေပးၿပီး ပရိသတ္ျပည္သူေတြအတြက္ ေပးဆပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ. အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထူးခန့္ေက်ာ္ကမရွိရင္ က်ေနာ္ဆီလာေတာင္း ပါေနာ္လိမ္မစားၾကပါနဲ႕ဆိုၿပီး နာမည္အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး လိမ္စားတဲ့သူေတြကို အခုလိုဒဲ့ေဆာ္ လိုက္ပါတယ္ေနာ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ထူးခန႔္ေက်ာ္က “မရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္စီ လာေတာင္းပါေနာ္၊အခုလို လူမပီသတာေတာ့ မင္းတို႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသလိုမင္းတို႔ရဲ႕သံသရာအတြက္ မင္းတို႔ကိုယ္စား ရွက္မိပါတယ္…
ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဒီအေကာင့္တခုပဲ ရွိပါတယ္၊ သူမ်ားကို သိကၡာက်ေအာင္လုပ္ၿပီး စားရမဲ့ထမင္းတလုပ္အတြက္ မင္းတို႔စားဝင္ရဲ႕လား ကြၽန္ေတာ္ဘက္က အျပစ္မျမင္ေပမဲ့မင္းတို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္နဲ႕ မေကာင္းတဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြကို သံသရာအတြက္ ယူမသြားပါနဲ႕ေတာ့..
ကြၽန္ေတာ္ဘက္က ဝဠ္ေႂကြးမ်ားရွိရင္လဲေက်ပါေစ၊ မင္းတို႔ဘက္က သူမ်ားေတြကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး စားရမဲ့ထမင္းလုပ္ေတြေဘးမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။
ဒီကေန႕အထိ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္သူ႕စီကမွ အလႉမခံဖူးပါေနာ္၊ လူလိမ္လူညာမ်ား ေဘးမွ ကင္းေဝးၾက ပါေစဆိုၿပီး” ျပတ္ျပတ္သားသား ေရးသား ေျပာလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ ပရိသတ္ႀကီး။
လူေတြကလည္းေနာ္ ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား သူမ်ားေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး လုပ္ေနတာကို မကူညီတဲ့အျပင္ နာမည္အလြဲသုံးစားလုပ္ ယူသုံးၿပီး လိမ္စားညာစားခ်င္ေနၾကလဲ မသိပါဘူးေနာ္။
ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း လူလိမ္လူညာလူေကာက္ေတြရဲ႕ ေဘးမွကင္းေဝးၾကကာ လူေကာင္းသူေကာင္း လူမွန္သူမွန္ေတြနဲ႕သာ ဘဝမွာေတြ႕ဆုံနိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
သူမကို မင်းသမီးဖြစ်တော့ ဟန်ဆောင်ကောင်းတာပေါ့လို့ပြောလာတဲ့အပေါ် ချက်ကျလက်ကျနဲ့ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တဲ့ ချောရတနာ